Kitra – «Poule des As»: nomontsanin’ny FC Vakinankaratra ny Elgeco Plus | NewsMada
Kitra – «Poule des As»: nomontsanin’ny FC Vakinankaratra ny Elgeco Plus
Nitranga ny tsy nampoizina teo amin’ny andro faharoa eo amin’ny «poule des As», dingana farany amin’ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra. Resin’ny FC Vakinankaratra ny Elgeco Plus.
Lavon’ny FC Vakinankaratra, tamin’ny isa mazava 3 no ho 1 ny Elgeco Plus Analamanga, teo amin’ny andro faharoa amin’ny «poule des As», fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra. Fihaonana notanterahina omaly alahady, tao amin’ny kianja Vélodrome Antsirabe. Tsy nampoizin’ny Elgeco Plus mihitsy ny lalao nasehon’ny FC Vakinankaratra, tamin’ity. Naneho fahavononana ny handresy hatrany am-boalohany, ireo mpilalaon’Antsirabe. Porofon’izany, nanokatra ny isa izy ireo, teo amin’ny minitra faha-10, tamin’ny alalan’i Jimmy Elysé. Niezaka nanohitra ny Elgeco Plus, taorian’io, saingy tsara fiarovantena ny FC Vakinankaratra. Henjankenjana ny fifandonana teo amin’ny roa tonta, ka nahazo karatra mena, i Eddy Bastia, mpiandry tsatobin’ny Elgeco Plus. Na nilalao 10 aza anefa ny ekipan’Analamanga, tsy nisy intsony ny baolina maty fa io isa tokana, 1 no ho 0 io, no nentin’ny roa tonta niala sasatra.
Nanohy ny fanafihany indray ny FC Vakinankaratra, teo amin’ny fizaram-potoana faharoa ka nahatafiditra baolina faharoa, i Claude Nirina. Nitady irika hamonoana baolina, taorian’io ny Elgeco Plus fa tsy tafavoaka mihitsy ry Bela sy ny namany. Namono ny baolina fahatelo, indray i Claude Nirina, teo amin’ny minitra faha-74, izay nahalavo tanteraka ny Elgeco Plus. Tany Mahajanga kosa, lavon’ny Fosa Jr, tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0 ny Cnaps Sport Itasy. Baolina matin’i Babou, tamin’ny lohany, teo amin’ny minitra faha-77.